Puntland oo sheegtay inay qabatay 20-qof oo Al-shabaab ka tirsan.
Wsaaradda amniga Puntland ayaa maanta sheegtay inay dad kala duwan ku qabtay howlgallo amniga lagu sugayay oo 48-dii saac ee lasoo dhaafay laga sameeyay Boosaaso, Garoowe iyo Galkacayo.
Howlagallada waxaa lagu sheegay inay ahaayeen kuwo lugu beegsanayay rag ka tirsan Al-shabaab, waxaana Puntlad ay sheegtay tiradii ugu badnayd oo ka tirsan Al-shabaab inay deegaannadodoa ku qabteen, gaar ahaana magaalooyin ay ka mid tahay Garoowe oo ah caasimadda Puntland.
Waxaa la sheegay in howlgalladu ay yimaadeen kaddib markii ay soo baxeen wararka sheegaya in rag ka tirsan Al-shabaab ay u soo baxsadeen deegaannada nabaddu ka jirto oo ay Puntland ka mid tahay, waxaana wasaaradda amnigu ay shaaca ka qaaday in howlgaladaas lagu qabtay 20-qof oo ururka Al-shabaab lala xiriirinayo.
Xasan Cismaan Maxamuud (Aloore), wasiirka amniga Puntland oo shir jaraa’id ku qabtay xaruunta wasaaradda amniga Puntland ayaa sheegay in howlgalladii ugu dambeeyay lagu soo qabtay dadkaas kala duwan.
Waxuu shirkiisa kusoo qaaday in ciidamada amnigu ay qabteen agabyo kala duwan oo raga ay gacanta ku hayaan ay ku doonayeen in nabad-gelyadda wax ku yeelaan, isagoo arrintaas ka hadlayey ayuu sheegay in ay weli socoto baaritaano ay wadaan hay’adaha baarista.
"Laamaha amniga Puntland ayaa howlgallo ay sameeyeen waxay ku soo qabteen dad tiradoodu gaarayso 20-qof, qalab iyo agab kale oo ay wateen, kuwaasoo ay ku doonayeen inay falal Argagixiso oo ka dhan ah dowladda iyo shacabka ku fuliyaan,” ayuu yiri wasiirka Amniga Aloore.
Agabaka ay wasaaraddu soo bandhigtay waxaay isugu jiraan bambooyin, fiilooyin iyo qalab kale oo ah kuwa qaraxyada lagu abaabulo, waxaana lagu qabtay howlgal laga fuliyay Garoowe saacadihii ugu dambeeyay.
“Way socon doonaan howlgalladu, waaxana si wadajir ah laamaha ammaanku baaritaanno uga wadaan dhammaanba deegaannada Puntland, markay ay soo dhamaadaan waxaan u soo bandhigi doonnaa shacabka Puntland iyo caalamka,” ayuu wasiirku hadalkiisa ku daray, isagoo xusay in ujeeddada holwgallada laga leeyahay ay yihiin xoojinta amniga.
Howgallada xilligan ka socda Puntland, waxay yimaadeen xilli dhawaan ay sheegtay wasaaradda amniga in xubno ka mid ah Al-shabaab ay soo gaareen deegaannada Puntland, kuwaaso kasoo cararaya dagaallada ka socda Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya oo ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM kula dirirayaan kooxda Al-shabaab.
Xisbiga AKP oo guul ka gaaray doorashooyinkii dowladaha hoose ee Turkiga.
Xisbiga cadaallada iyo horumarinta dalka Turkiga ee AKP ayaa helay 47.5%, codadkii doorashada dowladaha hoose ee Turkiga oo shalay la soo gaba-gabeeyay ,taasi oo ay si rasmi ah ugu qayb-galayeen dhamaan muwaadiniinta u dhashay dalkaas.
Tartanka ugu adag ayaa ka dhacay magaalooyinka waa weyn ee dalkaas, waxaana xisbiga ku soo xiga ee CHP uu helay codadkii la tiriyay 27.6%.iyadoo xisbigan uu si aad ah uga soo horjeedo habka ay u shaqayso xukuumadda Erdogon.
81 magaalo oo ka tirsan dalka Turkiga ayaa codadka doorashada laga dhiibtay waxaana 74-kamid ah magaalooyinkaas ay guushu ku raacday xisbiga AKP ,iyadoo markii ugu horeysay taarikhda dalkaas ay gabar xijaaban noqon doonto guddoomiye degmo gaar ahaan degmada Meran.
"Tani waxay jawaab u tahay siyaasiyiinta aan anshaxa lahayn iyo kuwa aan wax himilooyin ah lahay"ayuu yiri Erdogan oo taageerayaashiisa kula hadlayay isu soo baxyo ay taageerayashiisu ka sameeyeen meelo kala duwan oo dalka ah .
Xisbiga uu hogaamiyo Erdogan ayaa lagu eedeeyay in uu musuq-maasuq baahsan ka dhax-sameeyay gudaha dalka ,waxaana fadeexadda arintan la xiriirta ay soo shaac baxday ka dib markii ay is -casileen xubno muhiim ah oo dowladdiisa ka tirsanaa.
"Dadka oo dhan waa ay ku faraxsanyihiin qaabka ay dowladdu u maaraysay dhaqaalaha dalka oo markii hore aan wanaagsanayn," ayuu yiri Fadi Hakura oo ah falanqeeye dhinaca siyaasadda ah kana how-galka machad fadhigiisuna yahay London.
Ugu danbayntii doorashooyinka madaxtinimo ee dalka Turkiga ayaa dhici doona bisha Agoosto ee sanadkan ,waxaana si hor dhac ah loo sii shaaciyay suurtagal-nimada uu xisbiga AK-Party ku sii maamuli karo dalka,maadaama muddo 12s-sano ah u soo hogaaminayay dalka.
Guddoomiye xilka laga qaaday kaddib markii uu sheegay hadal muran keenay.
Guddiga wanaag-farista & xumaan reebista Somaliland, ayaa xilkii ka xayuubiyey gudoomiyahoodii sheikh Maxamed Xaaji Xiiray oo ay ka soo yeedhay hadal muran ku dhex abuuray bulshadda, ka dib markii uu sheegay in diintu aanay kala saraysiin magta Dumarka iyo Ragga, balse dhaqanku kala saraysiiyey.
Guddidan oo fadhi degdeg ah ku yeeshay xaruntooda ayaa xilkii si ku meelgaadh ah ugu wareejiyey gudoomiye ku xigeenkiisa. Guddida ayaa sheegay in guddoomiyuhu baalmaray shuruucddii loo igmaday, isla markaana aanay la qabin hadalkaasi ka soo yeedhay oo ay sheegeen in miyi iyo magaalaba lagu hadal hayo.
“Waxa aanu halkan ka cadaynaynaa in aanaan ku raacsanayn hadalka ka soo yeedhay Guddoomiyahayagii, hadii uu la toosnaaday arrinkaasina anaga tuur ayuu runtii nala yeeshay”ayey yidhaahdeen war-saxaafadeed ka soo baxay guddidaasi, waxaanay intaas ku dareen “Waxa aanu bulshada u cadaynaynaa in maanta laga bilaabo aanu guddoomiye noo ahayn, balse guddoomiye ku xigeenkiisii ayaa si ku meel gaadh ah u sii hayn doona xilka inta laga dooranayo guddoomiye cusub”.
“Dadkana reer Somaliland way la yaabeen hadalkaasi oo miyi iyo magaaloba dhagta ayaa taagan, waxaanan leenahay gudidu lama qabto isaguna banaanka ayuu naga joogaa, halkaas wixiisa ha ka sii wato ama ha ka joojiyo” ayey raaciyeen qoraalkoodda.
Si kastaba ha ahaatee, gudoomiyaha xilka laga qaaday ee guddida wanaagfarista Sheekh Maxamed Xaaji Maxamuud Xiiray oo ah wadaad si weyn looga yaqaano magaaladda Hargeysa ayaa warbaahinta ka sheegay in Magta Ragga iyo dumarku shareecadu aanay kala saraysiin, balse dhaqanku kala saraysiyey taas oo noqotay in dadku u rumaystaan in shareecadu kala saraysiiyey, balse ay tahay dhaqan dadku iska dhexlaan markii dambana isku bedeshay inay ka soo jeeddo arrin diineed.
“Kitaabka Qur’aanka iyo sunnaha Nabiga ee sugani Magta Raga iyo Haweenka may kala qaadin, Sheekh Maxamed Al-qasaali wuxuu yidhi, Aayada Magta ka hadashaa ma kala soocayso Magta Raga iyo Haweenka. Cida tidhi dhiiga Haweenka ayaa ka jaban ka Raga waa sheegasho been ah” ayuu yidhi Sheekh Maxamed Xaaji Maxamuud Xiiray oo ka hadlayey in diintu kala saraysiin magta dumarka iyo raga.
Culummo kale ayaa iyaguna arrintaasi si weyn uga horyimid, kuwaas oo sheegay inay wadaadka ka codsadeen inuu ka noqdo balse uu ku adkaystay, ka dibna ay go’aansadeen inay cadeeyaan inuu wadaadkaasi khaldan yahay.
Puntland oo Taageertay mid ka mid ah Maamulladii Baydhabo lagu dhisay.
Dowladda Puntland ayaa taageertay mid kamid ah maamullada koonfur-galeed Soomaaliya ee dhowaan lagu dhisay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.
Qoraal kasoo baxay madaxtooyada Puntland ee Garoowe ayaa lagu sheegay in Puntland ay taageersan tahay soona dhoweynayso maamulka uu hormuudka u yahay Madaxweyne Maxamed Xaaji C/rnuur.
"Dawlada Puntland waxay soo dhawaynasaa doorashadii sida nabadgelyada ah ku dhacday ee loogu doortay in Mudane Maxamed Xaaji Cabdinuur noqdo Madaxweynaha maamul goboleedka cusub ee Koonfurta Galbeed Soomaaliya.." war-saxaafadeedka ayaa sidaas lagu yiri.
Puntland ayaa dhanka kale ku boorrisay Dowladda Dhexe iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka ka dhashay dhismaha maamul goboleedka koonfur-galbeed Soomaaliya.
"Waxaan ugu baaqaynaa Dawlada Fedaralka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkaba inay fududeeyaan waxkasta oo abuuraya jewi wada hadal oo wanaagsan oo ay yeeshaan dhinacyada ka wada tirsan maamulka Koonfurta Galbeed ee Soomaaliya, si loo helo maamul ku dhisan nabad buuxda iyo caddaalad..."
Ugu dambeyntii waxay Puntland ugu baaqday Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya inay fududeyso sidii si dhaqso ah loogu soo gaba gabeyn lahaa dhismaha maamul goboleedyada dalka iyo weliba hirgelinta nidaamka federalism-ka.
Taageerada Puntland ay u miijisay maamulka koonfur-galbeed ee saddexda gobol ku saleysan islamarkaana madaxweynaha loogu doortay Maxamed Xaaji C/nuur, waxay kusoo aadeysaa xilli ay magaalada Baydhabo ku sugan yihiin Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, Guddoomiyaha Baarlamaanka Jawaari iyo mas'uuliyiin kale oo dowladda dhexe ka tirsan.
Ujeedada socdaalka Madaxweynaha iyo wufuudda kale ee dowladda dhexe ka socdaa ay Baydhabo ku tageen ayaa ah sidii loo soo afjari lahaa khilaafka taagan, islamarkaana loo sameyn lahaa hal maamul oo ay dhammaan dhinacyadu ku mideysan yihiin.
Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya Xuseen Cabdi Xalane ayaa sheegay in dawladda ay kordhinayso dakhliga kasoo xarooda gudaha in ka badan 50% sanandkan.
Waxa wasiirku uu maanta hortagay baarlamaanka Soomaaliya isaga oo u bandhigay miisaaniyadda sannadkan soo socda oo la saadaaliyey 218 milyan oo dollar.
Wasiirka oo waraysi siyey idaacadda VOA ayaa sheegay in ku dhowaad kala-badh miisaaniyadda ay saadaalinayaan inay kasoo xarooto gudahe.
Khadka telefoonka ee Muqdishu ayuu ugu warramaya Haaruun Macruuf, oo ugu horrayn weydiiyey wasiirka sida ay dakhligaasi kusoo xaraynayaan.
Isbitaal cusub oo Hay'add Turki ah ka hirgelisay xaruntii hore ee Dugsiga sare Banaadir ayaa waxaa ka socda dib u dhis iyo howllo dadka shacabka ah loogu adeegyo.
Isbitaalkan oo lagu magacaabo DEVA ayaa waxaa hirgeliyay Turkiga, kaasoo dadka u qabanaya adeegyo caafimaad, inkastoo uu yahay Lacag, Fiisitada kaliyana qofkii bixinayo 12 Dollarka Mareykanka ah.
Xaruntan caafimaad oo aad u weyn ayaa waxay ka kooban tahay dhowr qeybood oo kala duwan.
Barre Hiiraale “Dadka la jira Axmed Madoobe ma sheegan karaan magaca Mareexaan”
Korneel Barre Aadan Shire Hiiraale ayaa si adag u sheegay in ragga la safan hogaamiyaha maamulka KMG ee Jubba Axmed Madoobe aan loogu yeeri karin magaca beesha Mareexaan, isaga oo tilmaamay inay yihiin caado qaatayaal waa sida uu hadalka u dhigaye.
Waxa uu sheegay in Beesha Mareexaan ay mid ka tahay qorshaha Jubooyinka iyo Gedo, islamarkaana ay isaga taageersaan yihiin.
“Dadka la jira Axmed Madoobe ma sheegan karaan magaca Mareexaan, wa caado qaatayaal, Mareexaan oo dhan waa ka midaysan yahay Jubooyinka iyo Gedo, Axmed Madoobe isaganu waan is naqaan, balse wixii aan kala helno ayuu leeyahay”
Dhanka kale Barre ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga fadhiyo sidii magaalada Kismaayo looga saari lahaa ciidamada Kenya oo uu ku sheegay inay cadfow ku yihiin shacabka degan Jubooyinka.
Barre Hiiraale ayaa dagaal looga saaray magaalada Kismaayo ee gobalka Jubada Hoose, waxaana uu sheegaa inuu yahay madaxweynaha maamulka Jubaland State.
Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta Baydhabo kusii jeeda, xilli Xiisad Siyaadeed ay ka taagan tahay Baydhabo.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa lagu wadaa inuu maanta tago Magaalada Baydhabo ee xarunta Gobalka Baay, halkaasi oo ay ka taagan tahay xiisad ku aadan maamul Gobaleed.
Sarkaal ka tirsan Maamulka Magaalada Baydhabo, ayaa Dhacdo.com uxaqiijiyay in Madaxweynaha Soomaaliya uu maanta tagayo Magaalada Baydhabo, ammaanka Magaaladana siweyn loo xaqiijiyay oo ciidamo badan Magaalada lagu daadiyay.
Safarka Madaxweynaha uu maanta ku tagayo Magaalada Baydhabo, ayaa ku qotoma xiisadaha ka jira Magaalada Baydhabo, inkastoo suuragal ay tahay in Madaxweynaha uu baaqdo maanta.
Ciidamada Itoobiyaanka iyo kuwa Dowladda ee Magaalada Baydhabo ku sugan ayaa dhamaan wadooyinka Magaaladaasi lagu daadiyay, waxaana ay si weyn u adkeynayaan ammaanka Magaalada.
Shacab badan oo ka tirsan kuwa reer Baydhabo ayaa diyaar u ah soo dhaweynta Madaxweynaha Soomaaliya ee magaalada Baydhabo, iyadoo safarkaan ay utahay midkii labaad ee uu ku tago Magaalada Baydhabo.
Baydhabo hada waxaa ka taagan xaalad siyaasadeed oo aad ukacsan, iyadoo isbuucii aan soo dhaafnay Magaalada ay ka dhaceen banaanbaxyo Shariif Xasan Sheekh Aadan looga soo horjeeday.
Xiisada Siyaasadeed ee Baydhabo ka taagan, ayaa waxa ay udhaxeysa Maamulka lixda Gobol ee Koonfurta Soomaaliya iyo Maamulka saddexda Gobol ee dhawaan Madaxweynaha loo doortay.
Pro C/kariin Daa’uud Nuur oo dowladda ku dhaliilay in aysan rabin…
Pro C/kariin Daa’uud Nuur ayaa ku dhaliilay dowladda Federaalka ee Soomaaliya in xilligaan aanay isku diyaarin sidii loo baahin lahaa Federaalka islamarkaana shacabka loo bari lahaa.
Waxa uu sheegay in taasi ay sabab u tahay dalka oo dhan inay ka dhismaa maamulo dhiig ku daata islamarkaan maalin maalin walba keena dagaalo iyo dhibaato kale.
“Weli dowladda Soomaaliya ma aanu keenin wixii looga baahnaa sababtoo ah ilaa hadda waxaa la la yahay Federaalka in la hirgeliyo, maalin walba waxaa la maqlaa maamul cusub dhibaatana keena”
Ugu dambeen waxa uu ugu baaqay dowladda Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in deg deg ay ku dhaqan geliso nidaamka Federaalka, islamarkaana ay u istaagto xalinta dhibaato walba oo dalka ka dhacda.
Aadan Madoobe “Maamulkeena ma ahan kii Axmed Madoobe ee dadka lagu laayay”
Gudoomiyahii hore ee baarlamaanka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur (Madoobe) ayaa sheegay in maamulkooda Lixda gobal uu yahay mid la’isku raacsan yahay, wuxuuna sheegay in aanu la mid ahayn midka Axmed Madoobe ee Kismaayo lagu dhisay.
Sababta arintaasi ayuu ku sheegay in maamulkooda uu taageero xoogan ka heesto shacabka hase ahaatee maamulka Axmed Madoobe lagu dhisay si qasabn ah waa sida uu hadalka u dhigaye.
“Axmed Madoobe xoog ayaa lagu dhisay, shacabkana raali kama ahan, laakiinse anaga maamulkeena waa mid diyaar u ah shacabka taageerana haysta, ilaa Kismaayo ayaan maamuleeynaa”
Aadan Madoobe ayaa dhanka kale sheegay in doorashadii Sedaxda gobal ee dhawaan ka dhacday magaalada Baydhabo ay la mid tahay qof intuu riyooday hadana soo kacay.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble oo ka hadlay Howlgalka Ciidamada AMISOM.
Xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble Cali ayaa shaki geliyay in heshiisyo la ogyahay ay ciidamada AMISOM kaga howlgalaan Soomaaliya, isagoo sidoo kale ka hadlay ka mid noqoshada ciidamada dalalka safka hore ay ka mid noqdeen howl-galka AMISOM.
Xildhibaanka ayaa ayaa sheegay in ciidamada dalalka safka hore uu horay baarlamaanku u diiday, balse ay hadda ka mid noqdeen howlgalka AMISOM, iyadoo aanu baarlamanaku waxba ka ogeyn heshiisyada ay uga mid noqdeen howlgalkan.
"Ciidamada AMISOM howlgalkooda wax aan ka ognahay ma jirto, waxaa doonaynaa in la horkeeno heshiisyada howlgalka AMISOM baarlamaanka Soomaaliya si aanu wax badan uga ogaanno," ayuu yiri xildhibaan Cabdulqaadir Cosoble oo ka mid ahaa murashaxiintii ugu cad-caddaa doorashadii madaxnimo ee Soomaaliya sannadkii 2012-ka.
Mar uu ka hadlay ciidamada safka hore oo hadda doorka weyn ka qaadanaya howlgalka AMISOM ayuu sheegay inaan arrintooda la horkeenin baarlamaanka, isla markaana aanay waxba ka ogeyn.
"Ciidanka dalalka safka hore mar hore ayuu baarlamaanka diiday, waa nagula soo daray, baarlamaan la keenay oo lagu ansixiyay ma naqaanno, haddii heshiisyo lala soo galay ma garanayno," ayuu xildhibaanku si kulul u yiri.
Sidoo kale, xildhibaan Cosoble ayaa sheegay in madaxweynaha Somalia iyo ra'iisul wasaaruhu ay heshiisyo lasoo galeen dowlado iyo shirkado ajnabi, welina aan la hor-keenn baarlamaanka, iyaguna aysan waxba ka ogeyn.
"Waa in xukuumadda ay baarlamaanka horkeento heshiisyadii lala soo galay dalalka iyo shirkadaha shisheeye. Madaxweynaha Addis Ababa ayuu tagay heshiis ayuu soo saxiixay ma naqaano, ra'iisul wasaaraha heshiis ayuu soo saxiixay ma garanayno wax uu yahay, wasiirada heshiis ayay soo saxiixeen, dhammaantood waa in la hor-keeno baarlamaanka si wax looga ogaado," ayuu hadalkiisa ku soo daray Cosoble.
Xildhibaanka ayaa sheegay inaan loo baahnayn in meelaha la iska fadhiyo, mushaar oo keliyana la qaato, balse loo baahan yahay in mar walba lala xisaabtamo dowlada si loo horkeeno baarlamaanka heshiisyada dibadda lagu soo saxiixo.
Ugu dambeyn, xildhibaanku wuxuu ka hadlay arrinta baasaboorka iyo qaadashada kaararka aqoonsiga muwaadinimo, isagoo xusay in ummadda ay u maraan halis iyo dihbaato aad u badan.
"Waxaa dhibaato fara badan ku arkay arrrinta baasaboorka iyo kaararka aqoonsiga, dad badan ayaa shaqooyinka ku waayay, carruur dhalatay oo la qaadi lahaa ayaa loo waayay, shirkad cusub ayaa baasaboorka la siiyay, way keeni weysay in dadka ay gaarsiiso baasaboorka waa in baarlamaanka go'aan ka gaaro arrintaas," ayuu si kulul u yiri xildhibaanka.
Xildhibaan C/qaadir Cosoble Cali ayaa hadalkan ka jeediyay kulankii shalay uu ku yeeshay baarlamaanka Soomaaliya Muqdisho, iyadoo xildhibaannadii kale oo iyana hadlay ay diirradda saareen dhibaatooyinka haysta shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweyne Gaas oo Shaaciyay inuu Wadahadallo la furayo Dowladda Dhexe.
Madaxweynaha Puntland, C/weli Maxamed Cali ayaa sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay inuu wadahadallo la furo dowladda federaalka Soomaaliya, si mad madowga jira meesha looga saaro.
C/wali Gaas ayaa hadalkan ku sheegay wareysi uu siiyay VOA-da, isagoo muujiyay aragti ka duwan tii maamulkii isaga ka horreeyay ee uu hoggaaminayay C/raxmaan Sheekh Maxamed Faroole, kaasoo xiriirka u jaray dowladda Soomaaliya.
"Diyaar ayaa u nahay inaan wadhadal la furno dowladda federaalka, waayo waxaan ka mid nahay federaalka, sidaas darteed in la wadahadlo; wixii madmadow ah ee jirana laga gudbo mar walba waan ku dadaali jirnay," ayuu yiri C/wali Gaas.
Is-bedelka dhinaca hoggaanka ee ka dhacay Puntland horraantii bishii Janaayo ayay dad badan saadaaliyeen inay wax badan iska bedeli doonaan xiriirka u u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamul-goboleedka Puntland.
Madaxweynihii hore ee Puntland, Faroole ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay inay wax badan ka bedeshay dastuurka KMG-ka ah, isagoo sheegay inuu taas awgeed xiriirka u jaray dowladda Soomaaliya.
Nidaamka federaalka ayaa saldhig u ah inuu hirgalo dowlad-goboleedyo, waxaana arrintan ka jira is-qab-qabsi badan oo la xiriira habka maamullada loo dhisayo iyo sida ay ku shaqeynayaan.
Dastuurka u dagsan Soomaaliya ayaa dhigaya wax ka badan labo gobol ay noqon karaan maamul goboleed, hase ahaatee waxaa soo if-baxaya in gobollada dalka ay gundaha iskula jiraan, maadaama koox walba ay doonayso inay laba gobol iyo wixi ka badan ka dhigtaan maamul goboleed.
AMISOM oo sheegtay inay ku Wajahan tahay Degmada Xeebta ah ee Baraawe.
Taliska ciidamada AMISOM ee Somalia ka howlgaala ayaa sheegay inay ku wajahan yihiin degmada xeebta ku taalla ee Baraawe, halkaasoo ah goobta ugu muhiimsan ee ay Al-shabaab gacanta ku hayso.
AMISOM ayaa sheegtay in qorshaha ay ku doonayaan inay ku qabsadaan degmada Baraawe uu ahaa mid ay dajiyeen ka hor intii aysan qabsan degmada Qoryooley oo ka mid ah degmooyinka ay Al-shabaab kaga sugnayd gobolka Shabeellada Hoose.
“Hadda waxaan ku wajahannahay degmada Baraawe oo ah goob muhiim ah oo ay ku sugan tahay Al-shabaab,” ayaa wareysi ay saraakiil ka tirsan AMSIOM siiyeen telefishinka Al-jazeera ee xaruntiisu tahay magaalada Doxa ee dalka Qatar.
Al-shabaab ayaa deegaanno dhowr ah looga qabsaday dagaalladii billowday bishii lasoo dhaafay, waxaana degmooyinkaas ka mid ah, Buulo-burte oo gobolka Hiiraan ka tirsan iyo degmooyinka Xudur iyo Waajid oo ka tirsan Bakool iyo Buur-dhuubo oo iyana ka tirsan gobolka Gedo.
Sidoo kale, maalmo ka hor ayaa Al-shabaab laga qabsaday degmada Ceelbuur oo ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsan ee ay ka taliyaan, waxaana marka la isku daro degmooyinka Al-shabaab laga qabsaday ay gaarayaan 10-degmo.
Ciidamada AMISOM oo tiradoodu dhan tahay 22,000 oo askari ayaa waxay haatan ka howlgalaan gobollada dhexe iyo kuwa Koonfureed ee Soomaaliya, iyagoo isku dayaya inay Al-shabaab ka saaraan deegaannada ay ka taliso.
Balse Xarakada Al-shabaab ayaa horay u sheegtay inay iska difaaci doonaan wax walba oo weerar ah oo kaga yimaada Al-shabaab, inkastoo ay laba bilood gudahood dhul badan lumiyeen.
DHAGAYSO:Foosiya X.Aadan Afka Furatay,In maxakamad Lasari laha Uga Dhumatay Barlamanka,Sir Badan Bixisay
Kulankii maanta ee Mudanayaasha Baarlamaanka Soomaaliya aya lagu dhaariyay Xildhibaan Cusub oo lagu Magacaabo Fowziyo Yuusuf Xaaji Aadan oo horay usoo noqotay Wasiirka Wasaarada Arrimaa Dibada Ahaydna ku simaha Ra’isal Wasaaraha Xukuumadii Saacid. Fowziyo Yuusf Xaaji Aadan ayaa bedeleysa Xildhibaan Ismaaciil Xasan Jaamac oo iska casilay Jakada Kursiga Baarlamaanka sababo Xanuun awgeed Sida uu Sheegay Gudoomiyaha Baarlamaanka SoomaaliyaGudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya. Foosiya Xaaji Aadan Ayaa Sicad waxay uga Hadashay inay barlamaanka ka Gashay In Maxkamad Lasaari laha,Uga Dhuumatay Iyadoona Sheegtay Inaysan Cidna Ka Baqayn warkasi yahay Been cad.
Halkani Riix Ka Dhagayso waraysi
Riix Halkan Kadhageyso Fosiya
Deg Deg Daawo Video;-Maamulka Hargaysa oo Markale Ku Celiyay Hanjabaad Ka Dhan Ah Maamulka Puntlnd?
Mid ka mid ah xildhibaanada maamulka Soomaaliland ayaa waxaa uu sheegay inay soo qaban doonaan asagoo maxbuus ah madaxweynaha maamulka Puntland hadii uusan faraggalinta uusan ka deynin degaanada maamulka Soomaaliland.
Xildhibaan Cabadulqaadir Maxamed Xasan Indho-Indho oo ka mid ah golaha guurtida maamulka Lamgac Baxay Soomaaliland ayaa waxaa uu sheegay inay maxbuus ahaan ay u soo qaban doonaan madaxweynaha maamulka Puntland hadii uusan ka ut.
DAAWO TOP:W/Hore Gashandhiga Somaliya Mr Fiqi Mel laga Filanayn kaso baxay,Kaga Yaabiyey Silaanyo”Khaatumo laysma Hor tagi karo Guul gartey”(Video)
Wasiirkii Hore Ee Gashandhiga Xukumada Soomaaliya Ee dhacday Mr Fiqi Ayaa Ka mid ahaa Masuulinta ka Qeyb galay xaflafda Khaatumo Oo ka Dhacday magaalada Muqdisho Ayna ka Qeyb galeen Dadka Ugu caan san. waxa Uu cadeyey Mr fiqi Inay Khaatumo mudada Labada sano Ee jirtey Ku talab satay horumar Weyn Indhaha Laga qaban karayn waxana Uu Sheegay Inay Horumar gartey
Dublamaasiyiin da’yar ah oo Tababar loogu soo gaba-gabeeyay dalka Turkiga
Wasaaradda arrimaha dibadda waddanka Turkiga ayaa maanta u soo gaba-gabeysay tababar dubalamaasiyadeed da’yar Soomaaliyeed oo kala matalayay qaybaha kala duwan ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Da’yartan oo tiradoodu tahay 10 qof, ayaa waxaa shahaadooyin kala guddoonsiiyay agaasimaha akadeemiyadda dublamaasiyadda, Burco Cevik iyo danjire Murat Oguz, waxaana xaflad kooban loogu qabtay hoolka shirarka Mehmet Baydar ee wasaarada arrimaha dibadda Turkiga.
Tababrka oo soconayay muddo hal todobaad ah, ayaa waxaa dhallintaasi da’da yar ay ku barteen dajinta siyaasadda dibadda, hab maamuuska iyo qaabka wada-xaajoodka iyo wadahadallada loo guda-galo, loogana baaraan-dego iyo maadooyin kale oo muhiim ah.
Hadal kooban oo ay munaasabadda ka jeedisay, Burco Cevik ayaa waxay ku sheegtay inay ka fikirayaan sidii tababarro ballaaran loo siin lahaa dublamaasiyiinta da’da yarta ah ee Soomaaliyeed iyo kuwa sare intaba, iyadoo u rajeysay inay sida ugu dhaqsiyaha badan horumar u sameyn doonaan, ayna agaasimaan koorsooyin la jaan-qaadaya baahida aqooneed ee siyaasadda Soomaaliya.
Dhallintaas tababarka loosoo gabgabeeyay ayaa shalay loo qaaday Istanbul, halkaa oo muddo laba cisho ah ay joogi doonaan, waxaana sida la qorsheeyay ay booqan doonaan goobo taariikhi ah oo kala ah: Masjidka baluugga ah (Sultan Ahmed), matxafyada Hagia Sophia, Topkapi Palace iyo goobo kale.
Xarakada Al-shabaab oo Toogatay dhallinyaro ay ku eedeeyeen Jaajuusnimo
Xarakada Al-shabaab ayaa degmada Baraawe ku dilay saddex ruux oo ay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen ayna la shaqeynayeen hay'adda nabadsugida dowladda Soomaaliya.
Toogashada oo ka dhacday meel fagaare ah shalay oo Jimco ahayd ayaa waxaa ka qayb-galay dadweyne fara badan, waxaa ka hadlay saraakiisha Al-shabaab oo ku goodiyay inay sharciga marsiin doonaan cid walba oo falal basaasnimo ah lagu helo.
Saddexda qof ee la toogtay ayaa waxay magacyadooda kala ahaayeen, Maxamed Deeq Xasan Cali oo 28-jir ah, Maxamuud Faarax Sabriye Shuure oo 47-jir ah iyo Cabdinajiib Shire Barre.
Garsoorah maxkamadda Al-shabaab ee xukunka ridda ayaa sheegay in saddexdan qof qaarkood ay muddo bilooyin ah la shaqeynayeen hey'adda nabadsugidda, isla markaana ay qirteen dambigoodii lagu soo oogay.
Sheekh Maxamed Abuu-Cabdalla oo ah madaxa Al-shabaab ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in gacan adag ay ku qabanayaan dad uu sheegay inay basaas u yihiin sirdoonada reer galbeedka.
"Qofkii la helo isagoo u jaajuusaya cadowga iyo sirdoonka gacan bir ayaa lagu qabanayaa, waana sii wadaynaa goynta kansarka muslimiinta ku dhex jira," ayuu yiri Sheekh Abuu-cabdalla.
Bishii hore ayay ahayd markii Al-shabaab fagaare ku yaalla Baraawe ay ku toogatay saddex ruux oo ay ku sheegeen inay basaasiin u ahaayeen dalal reer galbeedka ah, dowladda Soomaaliya iyo maamulka Puntland.
Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo Al-shabaab dhawaan ay gacantooda ka baxeen deegaanno ku yaalla Koonfurta iyo bartamaha Somalia, kuwaasoo ay ka mid tahay degmada Ceelbuur ee gobolka Galguduud.
Uhuru Kenyatta oo Soomaalida ka dalbaday inay Argagaxisada la dagaalamaan
Madaxweynaha Kenya, Uhuru Kenyatta ayaa Jimcihii shalay la kulmay bulshada Soomaaliyeed ee Kenya ku nool, isagoo ka dalbaday inay qayb ka qaataan dagaalka lagula jiro wuxuu ugu yeeray argagaxisada. Isagoo xusay in aanay jirin cid lagu faquuqayo diinta ay aamisan tahay.
“Muslimka waa udub dhexaadka xukuumadeyda. Meel sare ayay kaga jiraan,” ayuu ka yiri Kenyatta kulan uu xafiiskiisa kula yeeshay xubno matalayay bulshada Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi ee xarunta dalka Kenya.
Kenyatta ayaa hadalkiisa ku daray: “Ma doonayno inaan cidna diin ku faquuqno, waxaan haysannaa xorriyad diimeed, kooxaha diimaha oo dhanna xushmad ayaan u haynaa,” ayuu madaxweynuhu ku yiri warsaxaafadeed laga soo saaray aqalka madaxtooyada Kenya.
Uhuru Kenyatta ayaa kulankii shalay ugu yeeray Soomaalida inay argagaxisada dagaal kala hor-tagaan. Iyadoo dowladda Kenya ay tan iyo sannadkii 2011 ka cabanaysay weerarro ay Al-shabaab ka geysanaysay gudaha dalkaas.
“Argagaxisonimadu ma shaqeyn karto. Waxaan diyaarinnay qorshe cusub oo lagu wacyi-gelinayo dhallinyarada, kooxaha aan diyaarinnay waxay tegi doonaan goob walba oo cibaado sida Masaajidda iyo kaniisadaha. Umana dulqaadanayno falalka argagaxisada,” sidaa waxaa yiri madaxweyne ku xigeenka Kenya, William Ruto.
Sidoo kale, madaxda Kenya waxay kulankii Jimihii ka sheegeen in xukuumaddoodu ay diyaarisay qorshayaal dhowr ah oo ay kaga hortagayso falalka argagaxisanimo.
Dhammaadkii kulanka ayaa ergooyinkii matalayay Soomaalida iyo xukuumadda Kenya waxay ku heshiiyeen in la xoojiyo dagaalka lagula jiro argagaxisada ku sugan gudaha dalka Kenya.
Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay in ka badan 200 oo xubnood oo intooda badan ay ahaayeen ganacsatada xaafadda Islii ee Nairobi, kuwaasoo matalayay xubnaha ganacsatada ah ee xaafaddaas ee Soomaalida ah.
Xubnihii ka qaybgalay kulankaas waxaa ka mid ahaa: xildhibaan Aadan Ducaale, xildhibaan Yuusuf Xaaji, xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto xaafadda Islii ee magaalada Nairobi oo ah halka ay ku badan yihiin Soomaalida.
Xildhibaan Yuusuf Xaaji Maxamed ayaa sheegay in Soomaalida-Kenya ay diyaar u yihiin ka qaybqaadashada dagaalka lagula jiro argagaxisada, ayna ka go’an tahay inay dalkooda ka nadiifiyaan argagaxisada. Isagoo yiri: “Shacabka Soomaaliyeed ee dhexdeenna ku nool waa inay qaadaan taallaabo walba oo suurogal ah si kooxaha argagaxisada Kenya looga adkaado.”
Ugu dambeyn, kulankan ayaa kusoo beegmaya xilli dowladda Kenya ay amar ku bixisay in qoxootiga Soomaalida ah ee ku nool magaalooyinka ay dib ugu laabtaan xeryaha qoxootiga, sidoo kalena ay ciidamada Kenya billaabeen inay qab-qabtaan dadka Soomaalida ah ee Nairobi ku nool.
wararkii ugu danbeeyey jiidaha hore magaalada laascaanood dagaalo hor leh puntland+somaliland
Ciidamada Xuduudaha Somaliland ayaa Maanta ku dhaqaaqay talaabo aan laga fileyn oo ku aadan inay dib uga bexeen Degaanada Xuduuda Somaliland iyo Puntland oo dhowaan ay soo Gaareen.
Masuul u hadlay Ciidanka ayaa ku Goodiyey inay difaaci Doonaan Deegaanada Somaliland hadii lagu soo Xad Gudbo sida uu hadalka u dhigay.
Maamulkii Degmada Afgooye oo xilalka laga qaaday iyo kuwo la magacaabay
Wareegto kasoo baxday wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Somalia, C/llaahi Goodax Barre ayaa xilalka looga qaaday dhammaan xubnihii maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose.
Xil ka qaadistan oo ah tii u horreysay oo xilal dhan looga qaado maamul degmo ayaa loo cuskaday qodobbo kala duwan oo ay ugu weyn tahay xagga amniga, iyadoo xubnaha xilalka laga qaaday la faray in xilalkooda ku wareejiyaan xubnaha cusub ee la magacaabay.
Mas’uuliyiinta xilalka laga xayuubiyay waxaa ka mid ah, guddoomiyihii degmada Afgooye, C/llaahi Cabdi Axmed (Iidey), guddoomiye ku-xigeenkii dhinaca siyaasadda iyo nabadgelyada, Mahdi Axmed Xasan, xoghayaha dowladda hoose iyo qaar ka mid ah xubnaha maamulka degmada.
Inkastoo wareegtadan aan si dhameystiran u helin, haddana waxaa la faray guddoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose iyo laamaha ammaanka inay ka qayb qaataan fulinta xil-wareejinta maamulka cusub iyo maamulkii hore.
Dhanka kale, waxaa wareegtada lagu magacaabay guddoomiyaha cusub ee Afgooye iyadoo loo magacaabay, Xaaji Gaabow, ku-xigeenka degmada ayaa sidoo kale loo magacaabay Xuseen Jibriil, halka madaxa dowlada hoose loo magacaabay Cismaan Carab.
Xil-ka-qaadistan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo dhawaanahan maamlka gobolka Banaadir uu xilalka ka qaadayay guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka Banaadir, kuwaasoo lagu eedeeyay xil gudasho la’aan.
AKHRISO:Cadaymo laga hayo Xiriirka U dhaxeeyay Al-shabaab iyo Maamulka Hargaysa
Waxaa isa soo taraya cabashooyinka kasoo yeeraya Dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool Koonfurta iyo Puntland, kuwaas oo tilmaamaya xiriirka ka dhaxeeya Kooxda Al-Shabaab iyo Somaliland kadib markii tiro dhoor ah lasoo bandhigay cadeymo muujinaya in Somaliland ka taageerto Al-Shabaab dhinaca tababarada, daaweynta iyo saanada Milatari oo iminka ugu dartay in ay gabaad siiso saraakiisha iyo ajaanibta kasoo carara Koonfurta Soomaaliya.
Masuulinta DF iyo shacabka Koonfurta Soomaaliya ayaa horey qeylo dhaan ugsoo saaray hubka iyo dagaalyahanda cusub ee hadba kusoo biiraya Al-Shabaab ee ka imaanaya Somaliland, ayagoo hanjabaad iyo digniino u diray Somaliland.
Gudoomiyaha Gobolka Banaadir Jeneral Muungaab oo arinkaa ka hadlaya ayaa yiri Axmed Godane iyo raga la socda ee Somaliland uga yimid in ay caruurteen laayaan waa inaan iska dhicinaa, asagoo shacabka faray in meel loogasoo wada jeesto dadka gobolada waqooyi uga yimid baabi’inta shacabka Koonfuureed ee Soomaaliya.
Dhinaca kalena madaxda Puntland ayaa daboolka ka qaaday in ay hayaan cadeymo muujinaya in Somaliland xiriir dhinacwalba leh kala dhaxeeyo Al-Shabaab, waxeyna tilaameen safarkii Siilaanyo ee Lasqoray inuu kusoo galbiyay oo buuralada Galgal soo gaarsiiyay dagaalyahano Shabaab.
Dadweynaha Puntland hadal heyntooda.
Dadweynaha ayaa isla dhexmaraya in maamulka Somaliland iyo Axmed Godane oo ka soo jeedo Beesha Arab ee Isaq uu ka dhaxeeyo xiriir aan qarsooneyn, isla markaana qofkasta ay cadeyn ugu filantahay sababta aan wali loo maqal maagalyiinka waa weyn ee waqooyiga oo waxgarad lagu dilay, sida Hargeysa, Burca, Barbara iyo Gabilley.
Waxaa lawada ogsoonyahay xiligii ay dhimatay Axmed Godane hoyadiis uu si aan qarsooneyn uga qeyb galay duugtii hoyadiis ayadoo ay goob jog ahaayeen qaar ka mid ah masuuliyiinta Somaliland.
Sidoo kale waxaa lawada ogsoonyahay oo aan qarsooneyn labada xaas ee Axmed Godane ee ku sugan Hargeysa in ay sanad walba dhalaan.
Hogaamiyaha Alshabaab ee buuraha Galgala waa nin lagu magacaabo Cabdalle Sandaal oo Al-Shabaab ugu yeerto Abu Hamza isla markaana kasoo jeeda Beesha Habarjeclo ee Isaaq oo qaraabo hoose yihiin Madaxweyne Siilaanyo.
Buuraha Galgala dhinaca Somaliland xiga wey furanyihiin oo haba yaraatee majiran wax ciidan Somaliland ah oo ilaalo ka ah, magaalada Burca iyo nawaaxigeeda saadka iyo socotadabu wey u furanyihin, halka dhinaca Puntland ay ku gadaaman yihiin ciidamo tira badan oo har iyo habeen Ilaalo ka ah, hadey jaanis ka helaana soo gudba oo dad ku laaya magaalooyinka Puntland.
Wey ka dharagsan yihiin shacabka Soomaaliyeed awooda ciidamada amaanka Somaliland ee jooga baraha kontoroolada oo aan marnaba gaadiidka baarin, hadana majiraan wax amni xumo, qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ka dhaca magaalooyinka Somaliland.
Dhagayso:Al-Shabaab Oo Ka Dalbaday Gabdhaha Soomaliyeed Inay Dagalamaan
Ururka Al-Shabaab ayaa waxa ay ka dalbadeen haweenka ku nool Gobalka Galgaduud inay ka qeyb qaataan dagaalada ka socda Gobalkaasi ee udhaxeeya Shabaab iyo ciidamada Huwanta.
Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali Dheere, afhayeenka Ururka Al-Shabaab, ayaa usheegay haweenka ku nool deegaan lagu magacaabo Xiindheere oo Galgaduud ku yaalo, inay ka qeyb qaataan haweenka.
“Waxaan leenahay Gabdhaha Walaalaha Muslimaadka ah ee reer Xiindheere, Cadoowg soo duulay ee dalka kusoo duulay Gabdhaha Muslimaadka ah waxaan ka rabnaa inay qeybtooda ka qaataan dagaalkaasi difaacida diinta lama kala xigo”Ayuu yiri Sheekh Cali Dheere.
HALKAN RIIX DHAGAYSO CODKASheekh Cali Dheere, wuxuu kaloo sheegay in Gobalka Galgaduud ay hada kusoo duuleen sida uu yiri ciidamo cadoow ah oo loo baahan yahay in laga hortago, hadii haweenka ay ku sameyn doonaan hadhoow inay xabsiga dhigaan xijaabkana ay ka dhigaan.
Hadalka Sheekh Cali Dheere ayaa kusoo aadaya, iyadoo Shabaab uu dagaal culus kaga furan yahay Gobalada dalka Soomaaliya, dagaaladaasi oo looga qabsaday deegaano badan oo Degmada Ceelbuur ay ugu dambeysay
Itoobiya oo Sheegtay inaysan wax lug ah ku lahayn Siyaasadaha Soomaaliya.
Danjiraha dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya, Wondimu Asammew ayaa sheegay inay dowladdiisa ay dhexdhexaad ka tahay siyaasadda is-diiddan ee Soomaaliya ka jira, isla markaana aysan wax lug ah ku lahayn maamullada is-haya.
Danjire Asammew oo wareysi siinayay Idaacadda Dalsan FM ee Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo kaleoo ay ka mid yihiin howlgallada ay ciiddanka Itoobiya ee ka mid ah AMISOM kula wareegeen degmada Ceel-buur iyo ujeeddada ay ciiddankoodu u joogaan Soomaaliya.
“Itoobiya wax faragelin ah kuma hayso siyaasadaha is-diiddan ee Soomaaliya, sidoo kale waa been wararka sheegaya in Itoobiya ay taageerto Shariif Xasan Sh. Aadan oo ka mid ah xildhibaannada baarlamaanka Soomaaliya,” ayuu dajiruhu ku sheegay wareysiga.
Sidoo kale, danjiraha Itoobiya ee Soomaaliya ayaa sheegay inay dowladda Somalia ay mas’uul ka tahay inay maamul u soo magacowday deegaannada Al-shabaab laga saaro, balse aysan iyagu wax shuqul ah ku lahayn arrintaas.
"Waxaan Soomaaliya u nimid si aan dowladda ka gacan siinno sidii lagu soo celin lahaa nabadda Soomaaliya, loogana adkaan lahaa Al-shabaab,” ayuu hadalkiisa ku daray darajiraha dowladda Itoobiya u jooga Soomaaliya, Wondimu Asammew oo ku daray hadalkiisa inaysan marnaba fara-gelin doonin arrimaha Siyaasadda waddanka Soomaalita.
Dhinaca kale, Wondimu Asammew oo wax laga weydiiyay dagaalka ciidamada dalka Itoobiya ka socda ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM qabsashadii ay Ceelbuur ka qabsadeen shalay Al-shabaab, isagoo ku jawaabay inay ka mid tahay howlaha ay u joogaan Soomaaliya, gobolka Galguduudna uu ka mid yahay gobollada sida gaarka ah loogu xil-saaray inay ka howlgalaan ciidamadooda.
Isagoo arrintaasi sii sharraxaya ayuu sheegay inay ciidamada Itoobiya toddobaadyo ka hor gacanta ku dhigeen degmooyinka Xudur, Waajid iyo Rab-dhuure oo kawada tirsan gobolka Bakool ee Galbeedka Soomaaliya.
Ugu dambeyn, danjiruhu wuxuu sheegay inay ciidamadooda la socdaan in ka badan Kun injineer, kuwaasioo deegaannadda la qabto ka fulinaya mashaariic lagu dayac-tirayo waddooyinka iyo adeegyada kale ee bulshada.
Kenya oo laga dalbay inay ka laabto go’aankii ku aadanaa Qoxootiga Somalida.
Hay’adda xuquuqda bani'aadamka ee Human Rights Watch ayaa si adag uga ka hadashay u cambaareysay amarkii kasoo baxay Kenya ee ahaa in qaxootiga Somalida ah ee dalkeeda ku nool ay iska baxaan magaalooyinka waaweyn ayna ku laabtaan xeryha qaxootiga ee dalkaas ku yaalla sida Kakuma iyo Dhahdhaab.
HRW ayaa sheegay inaanay habboonayn in xilligan qoxootiga Soomaalida ah dib loogu celiyo xeryaha qoxootiga, maadaama Kenya muddo dheer ay u dulqaadatay qaxootiga Soomaalida ah, ayna u muujisay deeqsinimo loona baahan yahay inay sidaas ku sii waddo.
Hadalka kasoo baxay hay’adda u doodda xuquuqda aadanaha ee HRW ayaa kusoo beegmaya xilli hadal kasoo baxay wasiirka arrimaha gudaha Kenya, Joseph Lenku uu ku sheegay in qoxootiga Soomaalida ah ay ku laabtaan xeryaha, taasoo uu ku sheegay inay tahay mid ay ku sugayaan ammaanka.
Kenyaa ayaa marti-galisay kumannaan qoxooti Soomaaliyeed ah, kuwaasoo kaga cararay dalkooda dagaallo iyo abaaro soo laalaabtay, waxaana qaarkood ay dalka Kenya ku sugan yihiin in ka badan 21-sano.
Qoxootiga Soomaalida ah ee ku nool magaalada Nairobi oo arrintan ka hadlay ayaa ku tilmaamay mid lagu doonayo in lagu dhibaateeyo, waxaana dhowr jeer ay sidan oo kale Kenya isugu dayday inay qoxootiga dib ugu celiso qoxootiga, inkastoo ay ka laabatay.
Xeryaha qoxootiga Dhadhaab iyo Kakuma ayaa waxaa ku jira in ku dhow hal milyan oo Soomaali ah, kuwaasoo inta badan sheega dhibaatooyin loogu geysto xeryahaas kuwaasoo ay ka mid yihiin dhac, dil iyo kufsi joogto ah.